08/28/13 ~ Myanmar Forward
SSPP/SSA အဖွဲ့မှ ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် အရွယ်မရောက်သေးသော ဒေသခံကလေးများအား လူသစ်စုဆောင်း လျက်ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးသီးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများ၌ ရှမ်းပြည်တိုးတက် ရေးပါတီနှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း)SSPP/SSA အဖွဲ့မှ ဇူလိုင်လအတွင်းကစ၍ အရွယ်မရောက်သေးသော ဒေသခံကလေးများအား လူသစ်စုဆောင်းလျက်ရှိရာ သြဂုတ် ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ၎င်းကျေးရွာများသို့ လူသစ်ထပ်မံစုဆောင်းရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကတည်းက ကလေးတွေကို လာခေါ်နေတာပါ။ အသက် ၈ နှစ်နဲ့အထက် ယောကျာင်္း လေးတွေကို ရွေးခေါ်ပြီး ၀မ်ဟိုင်းဌာနချုပ်မှာ လူငယ်ပရဟိတစာသင်ကျောင်းဖွင့်ထားတဲ့အတွက် ရှမ်းစာတွေ သင်ပေးတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြနေတာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေက ကိုယ့်မိဘအိမ်မှာပဲနေပြီး ကျောင်း တက်ချင်မှာပေါ့။ အဓိကကတော့ အရွယ်မရောက်သေးခင် လူသစ်စုတဲ့သဘောပါပဲ” ဟု ကျေးသီးမြို့ခံကျောင်း ဆရာတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
သူကဆက်လက်၍ “ကျွန်တော်က ဒီမြို့ခံဆိုတော့ ရှမ်းပြည်နယ်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)လို့ခေါ်တဲ့ SSA (၀မ်ဟိုင်း)အဖွဲ့အကြောင်း အကုန်သိတာပေါ့။ ရှမ်းစာသင်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတဲ့ ကလေးတွေကို စစ် သင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ သေနတ်တွေပေးပြီး ရွာတွေမှာ ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် ပြန်နေခိုင်းတာဗျ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အရွယ်ရောက်တဲ့ လူငယ်တွေအားလုံး SSA (၀မ်ဟိုင်း)အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီနှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) SSPP/SSA အဖွဲ့မှ ကျေးသီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများ၌ အသက်(၈)နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများအား လူသစ်အဖြစ်စုဆောင်းနေမှုများကြောင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားမိသားစုများမှာ ကလေးများ၏ပညာရေးအတွက် စိတ်ပူနေရကြောင်း၊ တောင်ယာစိုက်ပျိုး ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားထိန်းကျောင်း ရာတွင် လုပ်အားလျှော့နည်းမှုများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း၊ လူသစ်မပေးနိုင်သော ကျေးရွာများအနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု(၁)အုပ်စုလျှင် ငွေ(၆၅)သိန်းပေးဆောင်နေရကြောင်း၊ အချို့မိသားစု များမှာ အသက် ၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသော ယောင်္ကျားလေးများအား ရှင်ပြုပေးကာသာသနာ့ဘောင်သို့ အပြီးဝင် ခိုင်းခြင်း၊ အခြားမြို့/ရွာများသို့ ပညာသင်ကြားရန် ပို့ဆောင်ထားခြင်းတို့ဖြင့် SSPP/SSA ၏ လူသစ်စုဆောင်းမှု ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် အိုဘားမား ဆီးရီးယားကို တိုက်ခိုက်ဖွယ်ရှိ
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဆီးရီးယားကို စစ်ရေးအရ မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ရေး အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြင်ဆင်နေပြီး မဟာမိတ်နိုင်ငံများကိုလည်း စည်းရုံးထားကြောင်း သိရ
အမေရိကန်က ဆီးရီးယားကို တိုက်ခိုက်ဖွယ်ရှိ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်သွားဖွယ်ရှိကြောင်း အိမ်ဖြူတော်တာဝန်ရှိသူများက ပြေကြားလိုက်သည်။ အစောဆုံး ကြာသပတေးနေ့ (သြဂုတ် ၂၉ ရက်) တွင် ဆီးရီးယားကို အကန့်အသတ်ထားရှိသော စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု စတင်ပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်က စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးရီးယားကို စစ်ရေးအရ မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ရေး အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြင်ဆင်နေပြီး မဟာမိတ်နိုင်ငံများကိုလည်း စည်းရုံးထားကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတအိုဘားမား အနေဖြင့် ဆီးရီးယားကို အကန့်အသတ်ရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ရန် ချိန်ဆနေကြောင်း၊ စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ရှုထောင့်မျိုးစုံမှ စဉ်းစားသုံးသပ်လျက်ရှိကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ၏ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများက Washington Post သို့ ပြောကြားသည်။ Washington Post ၏ အဆိုအရ ဆီးရီးယားကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် မြေထဲပင်လယ်အတွင်းမှ စစ်သင်္ဘောများ အသုံးပြုကာ ကမ်းတက်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲမှာ ၂ ရက်ထက် ပိုမိုကြာမြင့်မည် မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်း ဓာတုလက်နက်တိုက်များ တည်ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ရသော နေရာများကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန်ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်သည် ခရုစ်ဒုံးကျည်များ တပ်ဆင်ထားသည့် စစ်သင်္ဘော ၄ စင်းကို မြေထဲပင်လယ်သို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဆီးရီးယားတွင် သမ္မတ အာဆတ်၏ အစိုးရတပ်က ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် ကလေးငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် ရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း အတိုက်အခံများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထောင်နှင့်ချီ အရေအတွက်ရှိသော ဆီးရီးယားပြည်သူများမှာလည်း ဓာတုအဆိပ်သင့်မှု ခံစားရကြောင်း သတင်းများကဆိုသည်။ ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆီးရီးယားအစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြား အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုများလည်း ရှိနေသည်။
From : ..planet
မူးယစ်ဆေးဖြတ်သူများထဲတွင် အသက် ၃၅နှစ်အောက်အမျိုးသမီးများ အများဆုံးပါဝင်
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under သတင်းများ | No comments
မူးယစ်ဆေး ဝါးဖြတ်ပေးသည့်စင်တာများ၌ မိမိအသိစိတ်ဖြင့် ဆေးလာဖြတ် ကြသူများထဲတွင် စိတ်ကြွဆေး သုံးစွဲသူများ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ယင်းတို့အနက်မှ အသက် ၃၅နှစ် အောက်လူငယ်အမျိုးသမီးများ အများဆုံးပါဝင်ကြောင်း သိရ သည်။
ယင်းတို့ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ် ဓာတ်ဖြင့်လာရောက်အကြံဉာဏ် တောင်းခံ၍ ဆေးဖြတ်သူများတွင် လူငယ်အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု များပြားကြောင်းကို'လူငယ်အား မာန်'ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုစင်တာမှအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုလှထွန်းမျိုးကပြောသည်။
''ဒီနှစ်လာရောက်ဆေးဖြတ် သူတွေမှာလူငယ်တွေပိုများတယ်။ နောက်ပိုင်းမိန်းကလေးတွေပါ ပါ ဝင်မှုများလာတယ်။ သူတို့ကိုယ် ပိုင်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ လာရောက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါ ကျွန် တော်တို့အနေနဲ့ Refer လုပ်ပေး ရတာပေါ့။ ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေး ပြီးဆေးဖြတ်နိုင်ဖို့ကူညီဆောင် ရွက်ပေးပါတယ်''ဟု ကိုလှထွန်း မျိုးက ပြောသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံး တွင် လာရောက်ဆေးဝါးစောင့် ရှောက်မှုခံယူသူမှာ ၃ဝကျော်သာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် ဩဂုတ် အထိ ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူသူဦးရေမှာ ၂ဝကျော်ရှိခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံး စွဲနေသူအမျိုးသမီးအများစုသည် အသက် ၃၅နှစ်အောက် လူငယ် များဖြစ်ကြပြီး ဈေးကြီးပေး၍ဝယ် ယူရသော နံပါတ်ဖိုးနှင့်စိတ်ကြွဆေးလိုမျိုး မူးယစ်စေသည့်အရာ များကို ပိုက်ဆံရှိလူတန်းစားနှင့် အနုပညာရှင်များအသုံးပြုနေကြ သလို အခြားသောငွေကုန်ကြေး ကျသက်သာသည့် မူးယစ်စေနိုင် သည့်အရာများကိုသုံးစွဲနေသူ အခြေခံလူ တန်းစားများလည်းရှိ နေကြောင်းMANA ဥက္ကဋ္ဌ ဦး ခင် မောင်ထွန်းကပြောသည်။
ဦးခင်မောင်ထွန်းက''မူးယစ် ဆေးဝါးဆိုတာ စမ်းသပ်သုံးစွဲနေ ရာကစွဲသွားကြတာပါ။ သုံးစွဲနေ သူအမျိုးသမီးတွေကတော့ အ သက် ၃၅နှစ်အောက်လူငယ်တွေ များတယ်။ ဆေးသုံးစွဲသူတွေက တော့ လူတန်းစားမျိုးစုံပါပဲ။ အ လုပ်သမားတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ ကနေလုပ်ငန်း ရှင်တွေအထိရှိကြ တာပဲ။ တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေပြန် လာပြီး ဆေးစွဲလာတာမျိုးတွေ လဲရှိတယ်။ ဒီစင်တာမှာဆေးဝါး ကုသမှုခံပြီးရင် ပြန်လည်ထူထောင် ရေးနဲ့ အလုပ်ရရှိရေးကို(MANA) က လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်''ဟု ပြော သည်။
လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းအ တွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအပြင် မူး ယစ်စေတတ်သောအရာများ သုံး စွဲမှုများတွင် လူငယ်အမျိုးသမီး များပါဝင်လာမှုသည် တဖြည်း ဖြည်းများပြားလာကြောင်းနှင့် အရေးယူခံရမည်ကို စိုးရိမ်နေသ ဖြင့်လာရောက် အကူအညီတောင်း ခံမှုမရှိသော လူငယ်အမျိုးသမီး များလည်းတွေ့ရှိနေရကြောင်း ဆက်လက်ပြောသည်။
ကိုလှထွန်းမျိုးက''တချို့မိန်း ကလေးတွေဆိုသုံးနေတာ၊ ဆေး စွဲနေတာသိနေတယ်။ တွေ့နေရ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီ ရောက်မလာတာတွေရှိပါတယ်။ အကူအညီလာမတောင်းကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမဆိုကူ ညီပေးမှာ ပါ။ အစိုးရနဲ့ မဆက်နွှယ်ပါဘူး။ တချို့တွေက ထင်ပါလိမ့်မယ်။ မူး ယစ်ဆေးဝါးလာဖြတ်ရင်အရေး ယူခံရမှာတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို တာဝန်ယူပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ် စေရပါဘူး''ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသမီးလူငယ်အများ စုသုံးစွဲနေခြင်းမှာ ငွေကြေးတတ် နိုင်ခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းစုံခြင်း နှင့် အမှန်တကယ်ဆေးစွဲနေသူ များအနေဖြင့် ဆေးဖြတ်ရန်မှာ မလွယ်ကူကြောင်း တောင်ဒဂုံမြို့ နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းမှ''လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလ လောက်တုန်းကတော့မြင်ဖူးတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ။ အသက်က ၁၉၊၂ဝအရွယ်လောက်ပဲရှိမယ်။ ရုပ်ရည်က သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ပါပဲ။ သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ သင်္ဘောသား တစ်ဦးကြောင့် သုံးတတ်သွားတာ လို့သိရတယ်။ သူသုံးနေရာကနေ ဖြတ်မရတဲ့အဆုံးနောက်ပိုင်း ရောင်းချတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ အခုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ အ ဖမ်းအဆီးတွေများလာတာ ကြောင့်ဖြစ်မယ်''ဟု ပြောသည်။
ယင်းကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုစင်တာကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင်၂၀၀၉ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
From : .. YMG
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါတဲ့ Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ application လေးဖြစ်တဲ့ Real Bokeh ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Romatic ဆန်ဆန် ရွှေရောင် Colour နဲ့အခြား effect လေးတွေထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ ပြင်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေက အရောင်အသွေးတော်တော်လေးကို လှသွားလို့ တော်တော်နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့ application လေးတစ်ခုပါပဲ။ Real Bokeh v2.0 for Android ကို Google Play မှာ ၂ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်သလို Myanmar Mobile App Store မှာတော့ freedownload ရယူနိုင်ပါတယ်။ အောက်က link မှာရယူပါ။
Real Bokeh v2.0 for Android အားရယူရန်
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ကဲ...အားလုံး… လက်နှစ်ဖက်ကို ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်လိုက်ပါ။ လက်ခလယ်ကိုခေါက်လိုက်ပြီး လက်ခလည်ရဲ့ကြောချင်းကြောထိအောင် ခေါက်ကွေးထားဖို့လိုမယ်နော်။ ကျန်တဲ့လက်ချောင်းများက ထိပ်ချင်းထိပ်ထိနေပါစေ။
ဒီကစားနည်းကို မကစားခင်မှာ လက်ငါးချောင်းက ဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။
လက်မထိပ်ကို ထိလိုက် ခွါလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ လက်မဆိုတာ မိဘကိုဆိုလိုတာပါ။ လက်မကိုခွါလို့ ရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိုနာသေရမယ်ဆိုတာရှိတယ် ဒါကြောင့် ခွါလို့ရတာပါ။
နောက်လက်မကိုပြန်ထိလိုက်ပြီး လက်ညှိုးကို ခွါကြည့်ပါ။ လက်ညှိုးကတော့ ညီအကိုမောင်နှမပါ။ သူတို့တွေလည်းကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ သူဖြစ်သွားရင် သင့်ကို ခွဲသွားမှာပဲ။
နောက်လက်ညှိုးကိုထိပ်တွေပြန်ထိထားပြီး လက်သန်းလေးကို ထပ်ခွါကြည့်ပါ။ ဒါကတော့ သားသမီးတွေပါ။ သူတို့လည်း ခွဲခွါကြမှာပါ။
ဒါဖြင့် နောက်ဆုံးလက်သူကြွယ်ကို ခွါကြည့်ပါ။ ခွါလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ တစ်သက်တာထာဝရလက်တွဲဖော်ပါ။ ဆေးပညာအရ အကြောတွေကအရမ်းကပ်နေလို့ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို လက်ထက်လက်စွပ်ကို လက်သူကြွယ်မှာ စွပ်ရတယ်ဆိုတာကကော ဆေးပညာကသတ်မှတ်ထားတာလား။ တိုက်ဆိုင်လို့များလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ….. အချစ်စစ်ဆိုတာ ခွဲလို့မရပါဘူး။
Miss Universe ပြိုင်ပွဲ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာ ယှဉ်ပြိုင်မည်
ရှရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် နိုဝင်ဘာလအတွင်း (၆၁) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကျင်းပမည် ဖြစ်သော Miss Universe အလှမယ် ပြိုင်ပွဲကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း Miss Myanmar Universe Organization တာဝန်ယူထားသော Hello Madam Media Group မှ မန်နေဂျာ ဒေါ်ဆုမြတ်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများသည် အရပ် ၅ ပေ ၆ လက်မ အနည်းဆုံး ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၂၇ နှစ်အတွင်း ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စကားပြော ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ရမည့် အပြင် မြန်မာ ဆန်သော အမျိုးသမီး ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အပျို ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောနိုင်ရန် မလိုကြောင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများသည် Hello Madam Media Group သို့ ဆက်သွယ်၍ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာများ ဝယ်နိုင်ပြီး ဆန်ခါတင် ရွေးချယ်၍ Miss Myanmar Universe ကို ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသူသည် ဆုငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ရှရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် ကျင်းပမည့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲတွင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
“ဒီပွဲကြီးက ကမ္ဘာ့အလှမယ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သွားပြိုင် ရမယ်ဆိုတော့ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ ဒီပွဲ အကြောင်းကိုလည်း ကြားပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်လည်း သူများနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု သွားပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထားပြီး သွားပြိုင်စေချင်ပါတယ်”ဟု Miss Grand Myanmar မထားထက်ထက်က ပြောကြားသည်။
ယခုအချိန်တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် လာရောက် လျှောက်ထားသူများမှာ ၃၀ ဦးခန့် ရှိပြီး သြဂုတ်လကုန်ထိ လျှောက်လွှာ တင်နိုင်ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလတွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု Organizer ပြုလုပ်ခွင့်ရ၍ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာကြောင်း Hello Madam Media Group မှ မန်နေဂျာ ဒေါ်ဆုမြတ် က ပြောကြားသည်။
Miss Universe ပြိုင်ပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တို့တွင် သုံးကြိမ် ဆက်တိုက် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး ယခု ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကျမှ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ဒီဇိုင်းအတွက် နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂုဏ်ယူ
နယူးဇီလန် ၀န်ကြီးချုပ် ဂျွန်ကေးက သူ့သမီးဖြစ်သူ စတက်ဖ်နီရဲ့ အ၀တ်ဗ လာ ဖက်ရှင်ပုံစံတွေအတွက် အရမ်း ဂုဏ်ယူ တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဂျွန်ကေးရဲ့ သမီးဖြစ်သူ စတက်ဖ်နီ ကေးဟာ ပဲရစ်ကောလိပ်မှာ အနုပညာ သင်ကြားနေသူပါ။
လာမယ့် လ မှာ ပဲရစ် ဒီဇိုင်းသတင်းပတ်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံဖော်တဲ့ အနုပညာ ပြပွဲ တခုလည်း ရှိနေတာပါ။ ဓာတ်ပုံတွေမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်း အသက် ၂၀ အရွယ် မစ္စ ကေးဟာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် အ၀တ်ဗလာနဲ့ အနုပညာမြောက် အောင် ပုံဖော်ထားပါတယ်။ “ဓာတ်ပုံတွေကတော့ သူ့ သင်ခန်းစာတွေရဲ့ အစိပ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကတော့ သူ အခု လုပ်နေတဲ့ အလုပ် အ ပေါ် အရမ်း ဂုဏ်ယူတယ်” လို့ နယူးဇီလန် ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ကေး က ပြောတာကို ဗြိတိန် အခြေစိုက် Sunday Times က ဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းကလည်း မစ္စတာ ကေးရဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် သားဖြစ်သူ မက်စ် ဟာ မိသားစုတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ရခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ၀န်ကြီးချုပ် အိမ်ရာမှာ ဆိုဖာတခုပေါ်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ် အိပ်စက်
နေ တဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံကြောင့် ပါ။
ကလေးသူငယ်တွေဆိုတာ အနာဂတ်အတွက် ခွန်အားတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လောကကို အလှ ဆင်ကြမယ့် ကလေး သူငယ်လေးတွေဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ခက်ထန်ကြမ်းတမ်း
ပြီး အန္တရယ်ကြီးမားတဲ့ ဘဝမျိုးတွေ၊လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ရော၊ မိခင်တွေကပါ အပစ်ပယ်ခံ ဘဝမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေကြရပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေကို စာနာနားလည်ပေးတဲ့ မိခင်များရဲ့ စကားသံ များကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
" ကလေးတွေက သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့ကို တကယ် ချစ်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်အောင် ကိုယ်က တည်ဆောက် ပေးရမှာလေ။ အဲဒါမှ သူတုိ့က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ယုံကြည်လာ ပြီးတော့ ကြီးလာရင် လည်း နိုင်ငံအတွက် တကယ်ကြိုး စားချင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဖြစ်လာတာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်စိတ်တွေက ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ်ချစ်စိတ်၊ ကိုယ့်အိမ်ကို ချစ်စိတ်၊ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကို ချစ်စိတ်ကစတာပဲ။ သူ့ ပတ်ဝန်း ကျင်က သူ့ကို တကယ် ချစ်တယ်လို့ တည်ဆောက် ပေးရင် သူကလည်း ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ပြန်ချစ်တယ်။ ကလေးရှေ့မှာဆိုရင်တော့ သူ့အဖေနဲ့ သူ့အမေတစ် ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တ ကယ် ချစ်ခင်နေကြ တယ်ဆို တာပဲ ပေးသိရမယ်။ သူယုံ ကြည်အားကိုးတဲ့သူက အချင်းချင်း မညီညွတ်ဘူး ဆိုရင်သူ ကအားငယ် စိတ် ဝင်သွားတတ်တယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေ လေ လွင့်နေတာကို မြင်တိုင်းတော့ စိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့။ အဲဒါ ကြောင့်မို့ အမေ့အိမ် ပညာရေး ကွန်ရက်တွေ၊တခြားလူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ လုပ်သမျှတွေထဲ မှာ ကိုယ်နိုင်သလောက် ဝင်ကူ တယ်ဆိုတာသားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ်က အခြေခံတာပါ။ကလေးငယ် တွေရဲ့ စိတ်ကလေးတွေက အဖြူ ထည်ပေါ့။ စာရွက် အဖြူတစ်ခုမှာဘာရေးရေး ထင်သလိုမျိုးပဲ။ စပြီး မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ အသိမမှား ဖို့ဘဲလိုတယ်။ "
" သူတို့လေးတွေကိုတွေ့ ရတာ ရင်ထဲမကောင်းဘူး။ သူတို့အတွက်တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရောပေါ့။ ဒီလို တောင်းတာထက် တချို့ ပန်းလေးတွေရောင်းနေကြတာ တွေ့ ရတာ ကျက်သရေ ရှိတာပေါ့။ အလုပ် တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ပို အဆင်ပြေတာပေါ့။ သူတို့ ပညာရှာရမယ့် အရွယ်မှာ မရှာရ တော့ အသိဥာဏ်ပညာ ဆုံးရှုံးတာပေါ့။ ဒီထဲက လူကောင်း၊ ပညာတတ် လေးတွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်။
တအားကြီး မထူးချွန်တောင် သူတို့ အတွက်တစ်နေရာတော့ ရှိ နေရမှာပေါ့။ အခုလို ကျတော့ နေရာတွေ ပျောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်က မတောက်ပနိုင် ဘူးပေါ့။အဓိကက စိတ်ဓာတ်ပါပဲ"
" အပြင်မှာ ကိုယ့်သားသမီးအရွယ်လေးတွေ လေလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေ ကိုတွေ့ရင် စိတ်မကောင်းတအားဖြစ်မိတယ်။ ပန်းရောင်းတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်း ပန်းလာ ရောင်းရင်လည်း မဝယ်ချင် ပေမယ့် အစ်မကအများကြီး ဝယ်ဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့် သားသမီးတွေကိုလည်း ဘာသာရေးကို လုပ်အောင်လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြတယ်။ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ် စသည်ဖြင့် အစ်မကတော့ ဆုံးမဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကံရဲ့အကျိုးကိုသိအောင် ပြောပြတယ်။ မိုးရွာထဲမှာ နို့စို့ အရွယ်ကလေးလေးတွေ လိုက် ပြီးတောင်းတဲ့ သူတွေလို တွေ့ ရင်လည်း တအားသနား တယ်။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ လည်း ဖြစ်မိတယ်။ အစ်မက တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကူညီပေးဖြစ်တယ်။ "
" ဘယ်မိဘမဆိုကိုယ့်သား သမီးကိုလမ်းမှားမရောက် စေချင်ပါဘူး၊ အစ်မမှာက သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတော့ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့စံပြဖြစ်ရမှာပေါ့၊ အစ်မဘက်ကတော့ သားသမီးအပေါ် အခုကတည်းက အများကြီးတွေးထားပါတယ်၊ သားသမီးတွေကို အစ်မကတစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်နေမိတယ်၊ သူတို့တွေနဲ့ အမြဲတမ်းတွဲနေမယ့် အမေမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်တယ်၊အဲဒီလို အလေ လွင့်နေတဲ့ကလေးတွေကို အစ်မအရမ်းသနားတယ်၊ အစ်မအဲဒီလိုမျိုးတောင်းတဲ့ ကလေးတွေတွေ့ရင် သူတို့ ကိုအစ်မဆုံးမတယ်။လိမ္မာ အောင်လည်းအမြဲတမ်းပြော ပေးတယ်။ ကလေးတွေတွေ့ ရင်ပိုပြီးသနားလည်းသနား တယ် မေတ္တာစိတ်လည်းထားတယ်"
အနုပညာမျိုးရိုးရှိလို့ ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်က မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ (ပိုးအိဖြူဇင် နှင့်တွေဆုံခြင်း)
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under တွေ့ဆုံမေးမြန်း | No comments
မေး - မော်ဒယ်လောကကို စဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကရော။
ဖြေ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က စတင် ပြီး ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မော်ဒယ် ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ Miss People မှာ First Runner Up့ စ ရခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Miss International မနန်းခင်ဇေယျာတို့နဲ့အ တူဝင်ပြိုင်တုန်းကMissငွေဆောင်ဆုရခဲ့တယ်။
မော်ဒယ်လောကထဲကို စဝင်ဝင်ချင်းတော့ အခက်အခဲကတော့ ရှိတာပေါ့နော်။
မေး - မော်ဒယ်လောကမှာ ထူးထူးခြားခြား ဆံ ပင်ရှည်ထားတဲ့သူနည်းတယ်နော်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ ဆံပင်ရှည်ထားတဲ့သူ သိပ် မရှိဘူး။ ညီမက ဆံပင်အရှည်ကို ငယ်ငယ်လေး ကတည်းကထားတာပါ။ 'ယူရှီးဒိုး' ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဆံပင်နဲ့ဆုရထားဖူးတော့ ပရိသတ်က သိနေ တာပေါ့။ ပိုးအိဖြူစင်လို့ ပရိသတ်တွေ သိတာ ကလည်း ဆံပင်ကြောင့်ပဲ။ တခြားမော်ဒယ်တွေ နဲ့ကွာတာကလည်း ဆံပင်အရှည်ထားတာကြောင့် ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း FACEBOOK ကွန် မန့်တွေပေးတယ်လေ။ ဆံပင်ရှည်နဲ့ပဲလိုက်တယ် လို့။ ဒါပေမဲ့ အခုနည်းနည်းတောင်တိုသွားပြီ။ ဆံပင်က ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းနေရတာဆိုတော့ ပျက်စီးတဲ့ အရာတွေလည်းရှိလို့ နည်းနည်းတော့ တိုသွားပြီ။ တအားကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး - အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက မော်ဒယ်တ ချို့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့ ပြိုင်ကြရ မယ့်အနေနဲ့ ညီမအနေနဲ့ရော ဝင်ပြိုင်ချင်စိတ် မရှိဘူးလား။
ဖြေ - ရှိတာပေါ့။ အင်မတန်ကို ဝင်ပြိုင်ချင် တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို သွားပြိုင် တယ်ဆိုတာက ဘာသာစကားလိုတယ်။ စန္ဒရား လည်း တီးတတ်ရတယ်။ အဲဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကို သွားပြိုင်ဖို့ဆိုတာက ကိုယ့်မှာလိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ မပြည့်စုံသေးဘူး။ ပြင် ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို သွား ပြီးတော့ ပြိုင်ရမယ့်သူတွေကလည်း အကုန်လုံး တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေက များတယ်လေ။ ဒါပေ မဲ့ ဝင်ပြိုင်ဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က Ready ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်။ အကုန်လုံးပြည့် စုံပြီဆိုရင်တော့ ဝင်ပြိုင်ဖြစ်မှာပါ။
မေး - မော်ဒယ်အလုပ်ကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဖြစ်သွားမှာလား။
ဖြေ - မဟုတ်ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ် ချင်တာပါ။ မော်ဒယ်လောကထဲကို ဝင်တာက သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို အဲဒီလိုင်းကဝင်ရင်ပိုပြီး တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာ ပါ။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို အစိမ်းသက်သက် ကြီးဝင်ရင် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ။ မော်ဒယ် ဘက်မှာ နည်းနည်းလောက်ပိုပြီး ကိုယ့်အတွက် နာမည်ရလာတာနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုပြောင်း မှာပါ။
မေး - လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ဘာ တွေ လုပ်နေလဲ။
ဖြေ - လတ်တလောက မဂ္ဂဇင်းကာဗာနဲ့ ဂျာ နယ်ကာဗာတွေ ရိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ကြော်ငြာ ရိုက်ဖို့လည်း ရှိတယ်။
မေး - အခုမော်ဒယ်လောကထဲကို ဝင်လာတော့ လက်ဦးဆရာကရော ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ။ အိမ် ကရော ကန့်ကွက်တာတွေ ရှိလား။
ဖြေ - မရှိပါဘူး။ အိမ်ကလည်း ဒီအနုပညာ အလုပ်ကို ဝါသနာပါတဲ့သူတွေပဲလေ။ လက် ဦးဆရာကတော့ Teacher မိုးပေါ့နော်။ သူက တော့ ပိုးအိရဲ့ လက်ဦးဆရာပါပဲ။
မေး - အနုပညာမျိုးရိုးရှိလား၊ ရှိရင်ရော သူတို့ တွေက ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးတွေပေးလဲ။
ဖြေ - အနုပညာမျိုးရိုးရှိပါတယ်။ မစမိုင်းလ်က ညီမရဲ့ အစ်မတစ်ဝမ်းကွဲပါ။ အစ်မကလည်း သူ့ အလုပ်နဲ့သူ၊ ညီမကလည်း ကိုယ့်ဘာသာနေတာ ဆိုတော့ ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိပါဘူး။ ဒါ ပေမဲ့ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုနဲ့သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အနုပညာမျိုးရိုးရှိလို့ ကိုယ့်ကိုထောက် ပံ့ပေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မလုပ်ရင် ဘာမှမရဘူး။ အဲဒီမူကိုပဲ ကျင့်သုံးတယ်။
မေး - ညီမပြောချင်တာများရှိရင် ပြောပေးပါလား။
ဖြေ - ထွေထွေထူးထူးတော့ မရှိပါဘူး။ ညီမ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ အနုပညာအလုပ်ကိုပဲ တစ် စိုက်မတ်မတ်နဲ့ ဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်သွားမယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကလည်း ဒီအနုပညာ အလုပ်ကို ဝါသနာပါတဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင် လောကမှာ နေရာတစ်နေရာရအောင်လို့ကြိုး စားသွားမယ်။ အခုက ပရိသတ်အနည်းနဲ့အများ ပဲ သိနေတယ်ဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဒီထက် ပိုမိုပြီးသိရှိအောင် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သွားမယ်။
အမျိုးသမီး၏ပါးကို သံပြားဝိုင်းဖြင့် လှီးခဲ့သူများ၏ပုံတူများ ရဲကရရှိထားပြီ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပါးကို သံပြားဝိုင်းဖြင့် လှီးခြစ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည့် သူများ၏ ပုံတူရုပ်ပုံပန်းချီများ ရဲများ၏လက်ဝယ်ရရှိထားပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရန် အမြန်စုံစမ်း ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် အောင်ထွန်းလွင်က ဆိုသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူ နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးသည် နှာတံချွန်ပြီး အသားညိုကာ အရပ်မှာ ငါးပေငါးလက်မ ခန့် ရှိကြောင်း၊ ကျန်တစ်ဦးမှာ မျက်နှာဝိုင်း၊ ဆံပင်ရှည်၊ အရပ်ပုပြီး အရပ်ငါးပေ နှစ်လက်မခန့် ရှိသည်ဟု ကာယကံရှင်၏ ထွက်ဆိုချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းရဲဌာနမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသို့ ဆွဲခြစ်သွားသူများကို ထိုအမျိုးသမီးက မသိရှိဘဲ လူမြင်လျှင် မှတ်မိကြောင်း တစ်ဦးက ဆိုက်ကား အားတားပြီး ကျန်တစ်ဦးက သံပြားအ၀ိုင်းဖြင့် ယာပါးကို ဆွဲခြစ်၍ ထွက်ပြေးသွားသည်ဟုလည်း ကာယကံရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ချိုချိုဝင်း က ရဲအားပြောပြထားပါသည်။
ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၏ပါးတွင် သုံးလက်မခန့် ဒေါင်လိုက် ပြတ်ရှဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသနေသည်။
အဆိုပါ အမှုအခင်းကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းက အမှုအမှတ်(ပ) ၃၁၂/ ၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းမိပါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၆/၃၄၁/၁၁၄ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ရဲဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပရိသတ်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
VMA ဂီတ ဆုပေးပွဲမှာ ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အံ့သြစရာဖြစ်အောင်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်ပါ.. တစ်ခါမှ မမြင်တွေ့ဖူးတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ Sexy ထက် လွန်ကဲတဲ့ကကြိုးကကွက်တွေကြောင့် ၀ီလ်စမစ်တို့.. ရီနားဟားတို့လို ကမ္ဘာကျော်ကြီးတွေတောင် ..မယုံနိုင်ဖွယ်ငေးကြောင်ခဲ့ရပါသတဲ့..။ လျှာတန်းလန်းထုတ်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ပါဖော့မန့်တွေနဲ့ လွန်ကဲစွာ ဖျော်ဖြေမှုတွေ က သူ့ကို အကောင်းဆီ..ခေါ်သွားမလား၊ အဆိုးဆီ ခေါ်သွားမလား စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ..။ တကယ်တမ်းတော့ သူဟာ ဒီလိုမျိုး ၀တ်စားဆင်ယင်ဖျော်ဖြေလေ့ရှိသူ မဟုတ်ခဲ့တာကြောင့် ဘာကြောင့် အခုလို ပါဖောမန့်စ် လုပ်ခဲ့သဲ ဆိုတာ စိတ်ပါဝင်စားစရာပါပဲ..။
ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးအောင်မြတ် အုတ်ဂူအား မြေးများက ပြုပြင်ရန် တောင်ကြီးစည်ပင်သို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ
ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးအောင်မြတ် အုတ်ဂူအား တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - မြဝန်းရံ
တောင်ကြီး ၊ သြဂုတ် ၂၇ ။ ။ ဦးကျော်သူ (နာရေး ကူညီမှု အသင်း၊ ရန်ကုန်)က စော်ဘွားကြီး အုတ်ဂူသို့ သွားရောက်ကာ မှတ်တမ်း တင်သည့် ဩဂုတ် ၂၄ ရက်ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ် နေ့စဉ် သတင်းစာ (စာ-၁၇) သတင်းကို ဖတ်ပြီးနောက် တောင်ကြီးမြို့ ချမ်းသာ ရပ်ကွက်အတွင်း တည်ရှိ နေသော ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးအောင်မြတ် အုတ်ဂူအား မြေး တော်စပ်သူ များက ဝိုင်းဝန်း ပြုပြင် မွမ်းမံ လိုသဖြင့် မန္တလေးမြို့မှ ဩဂုတ်၂၅ ရက်က ရောက်ရှိ လာကြောင်း သိရသည်။
မန်တလေးမြို့တွင် နေထိုင် သောမြေးဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့် ၇၀ နှစ်နှင့် မြစ်ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းသူဇာ အောင်တို့က တောင်ကြီးမြို့သို့ စော်ဘွားကြီး အုတ်ဂူအား မွမ်းမံရန် ရောက်ရှိ လာခြင်း ဖြစ်ပြီး တောင်ကြီးမြို့ စည်ပင် ဌာနသို့ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံ ထားသည်ဟု ကာယကံရှင်များက ပြောကြားသည်။ စော်ဘွားကြီး၏မြေးများ ဖြစ်သော တောင်ကြီးမြို့နေ ဒေါ် သိန်းသိန်း(ခ) ဒေါ်စောကြည်သိန်း ၇၈နှစ်၊ ဒေါ်ခင်ဦး ၆၆ နှစ်တို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံကြပြီး ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ယခု ကဲ့သို့ မထင်မရှား ဖြစ်နေသော ဂူအား အုတ်တံတိုင်း ကာရံ ထိန်းသိမ်း လိုကြောင်း သိရ သည်။
စော်ဘွားကြီး၏ မြစ်တစ်ဦး က ''နိုင်ငံတော်က သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး အနေနဲ့ အသိအ မှတ်ပြုတဲ့ နေရာ တစ်ခု ရွှေ့ပြောင်း ပေးနိုင်ရင်လဲ ကောင်းမယ်။ အစက နေရာ အကျယ်ကြီး။ အခုတော့ အိမ်တွေကြားထဲ အိမ်သာတွေက အမြင့်က ဖြစ်နေပြီ။ နောင်ဆို လုံးဝပျောက် မသွားဘူး မပြော နိုင်ဘူး။ သပ်သပ် ရပ်ရပ် သီးသန့် နေရာလေး ပြောင်းရွှေ့ပေးရင်လဲ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်''ဟု ၎င်း၏ ဆန္ဒကို ပြောကြားသည်။
စော်ဘွားကြီး မကွယ်လွန် မီအထိ နိုင်ငံတော် အစိုးရ(သမ္မတကြီး စဝ်ရွှေသိုက်)က ထောက်ပံ့ ငွေ လစဉ် ၅ဝဝ ကျပ် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကွယ်လွန်သော အခါလည်း နိုင်ငံတော် ဈာပနအဖြစ် တာဝန် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ နာရေးကူငွေ ၅၀၀၀ ကျပ် ပေးခဲ့ပြီး ခုနစ် ရက်လုံး ဧည့် ပရိသတ် များကို ဧည့်ခံသည် အထိ တာဝန်ယူ ပေးခဲ့ကြောင်း မြေးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ဦးက ပြောပြသည်။ ထိုစဉ်က သူမမှာ စော်ဘွားကြီးနှင့် အတူ နေရပြီး အသက်၁၃ နှစ်သာ ရှိသေး သည်ဟု သိရသည်။
စည်ပင်က ခွင့်ပြုပါက ပြုပြင် ရန်မြေး သုံးဦးက ငွကျေပ် ၁၁ သိန်း မတည် ထားသည်ဟု သိရသည်။
သမ္မတဟောင်း ဦးနေဝင်း သမီးပိုင် နဝရတ် ဟိုတယ်ကို ကြွေးကျန် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းကျော် ဆပ်ရန် အစိုးရ သတိပေး
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၇
နိုင်ငံတော် သမ္မတဟောင်း ဦးနေဝင်း၏ သမီး ပိုင်ဆိုင်သော နဝရတ် ဟိုတယ်က ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကြွေးကျန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းကျော်ကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးဆောင်ရန် အစိုးရက တရားဝင် သတိပေးစာ ပို့ထားကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ပြည်သူ့ ငွေစာရင်း ပူးပေါင်း ကော်မတီ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ကြွေးကျန်ကိစ္စ ရှင်းလင်းရန် ဇူလိုင်လ အတွင်းက မှုလပိုင်ရှင်ထံ ဆက်သွယ်သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရသဖြင့် အဆိုပါ ဟိုတယ်ကို ခေတ္တ ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းဟိုတယ်၏ ယခင် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအေးဇော်ဝင်း က မြန်မာ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ထံ ကုမ္ပဏီအသစ် ပြန်လည် လျှောက် ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ကြွေးကျန် များ ပေးရန် သတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာအရ သိရှိရသည်။
အချို့သော ဟိုတယ်များမှာ ကြွေးကျန်များ ပေးချေပြီး ဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာ ပေးချေနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ကြွေးကျန်များ ပေးဆောင်ရန် ကျန်နေသေးသည့် ဟိုတယ်များ ရှိနေသေးကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာကို ကိုးကား၍ ပြည်သူ့ ပူးပေါင်း ငွေစာရင်း ကော်မတီဝင် ဒေါ်တင်နွယ်ဦးက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ ဟိုတယ် ခုနစ်ခုက ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးဆောင်ရန် ကြွေးကျန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၂ç၈၉၀ သန်း ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ယင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသားများကို ပြည်တွင်း၌ အချိန် အကန့်အသတ်မရှိ နေထိုင်ခွင့်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် တရားဝင် လက်ထပ်ထားသူ နိုင်ငံခြားသား ဇနီး၊ ခင်ပွန်း များကို ပြည်တွင်း၌ အချိန် အကန့်အသတ်မရှိ နေထိုင်ခွင့် ပြုထားကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားပြီး ပြည်ပ နိုင်ငံသား ခံယူထားသည့် နိုင်ငံခြားသား များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် တရားဝင် လက်ထပ်ထားသူ ပြည်ပ နိုင်ငံသား များသည် လူမှုရေး ပြည်ဝင် ဗီဇာဖြင့် ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အချိန် ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်လိုပါက လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန တိုင်း ဦးစီးဌာနမှူး ရုံးထံ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်း အကြိမ်ကြိမ် တိုးမြှင့် နေထိုင်နိုင်ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထား သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုထားသည့် နိုင်ငံခြားသား ဇနီး၊ ခင်ပွန်းသည် (လူမှုရေး) ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နေခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်လိုပါက မည်သည့်ဌာန အကြီးအကဲ၏ သဘော တူညီချက်ကိုမျှ ရယူရန် မလိုဘဲ ဆန္ဒရှိသရွေ့ အကြိမ်ကြိမ် တိုးမြှင့် နေထိုင်ခွင့် ပြုပေးနေကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
“တခြား နိုင်ငံသား ခံထားတဲ့ မြန်မာတွေလည်း အလုပ် အခြေအနေအရ ဆိုတော့ အကြာကြီး မနေနိုင် ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ ယူထားတဲ့ သူကတော့ ပြည်တွင်းမှာ သူတို့အလုပ်ကိစ္စရှိတဲ့ အခါမျိုးဆို ကြာ ကြာနေတာပါ” ဟု စင်ကာပူ နိုင်ငံသား ခံယူထားသူ မြန်မာပြည်ဖွား အိုင်တီ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြည်ပ နိုင်ငံသားများ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းအတွက် ဗီဇာ ခွင့်ပြုစဉ် က ၂၈ ရက်နှင့် ပထမ အကြိမ် နေခွင့် သက်တမ်း သုံးလအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၆ ဒေါ်လာ ကောက်ခံပြီး ဒုတိယ အကြိမ် နေခွင့် သက်တမ်း တိုးချိန်မှ စ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် နေခွင့် ခြောက်လအတွက် ဒေါ်လာ ၉၀ ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန် ထားသည်။
ဖူရှင်းဘရားသား(စ်)ကုမ္ပဏီကရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိုက်နှိပ်အသုံးပြုထားသော လက်ဖက် ခြောက်ဘူးများ
ကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်လည် သိမ်း ဆည်းပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် စီးကရက် ဘူးပုံ လက်ဖက်ခြောက်ဘူးပေါ် တွင်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းထည့်ဘူးပေါ်တွင် လည်းကောင်းရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိထားခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့တွင် ကမ္ဘာအေးရှိ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ ရာတွင်အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစိုးမင်းထွန်းက အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခြင်း
”စေတီပုံနဲ့ ဈေးကွက်ထဲရောင်းဖို့တော့ မဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒါကလက်ဆောင် ပေး တာပဲယူသုံးသုံး တကယ်တော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မသုံးသင့်ဘူးပေါ့”ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ လက်ဖက်ခြောက်ဘူး ၅ဝ ကို ဖူရှင်းဘရားသား(စ်)ကုမ္ပဏီက နီးစပ်ရာအသိုင်း အဝိုင်းများ ကိုလက်ဆောင်ပေးရန်အတွက် တရုတ် နိုင်ငံကူမင်းသို့မှာယူခဲ့ပြီး သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း တွင် မြန်မာနိုင် ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
”နီးစပ်ရာ သူတို့စီးပွားရေး မိတ်ဆွေတွေ ရှိတယ်။ ပေးလိုက်တယ်။ ထင်တာက ပေးလိုက် တဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း ဒါမျိုးက အထွဋ် အမြတ်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးကို လှူရင်းနဲ့မှ မြင် တာလို့ထင်တယ်”ဟု ဖူရှင်းဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီမှ ဥပဒေရေးရာ အကြံပေး ဦးဇင်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ လက်ဖက်ခြောက်ဘူးမှာ ယူစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီလိပ်စာ၊ လိုဂိုနှင့် ၄င်း တို့ပိုင်ဆိုင်သော စီးကရက်စက်ရုံ လိုဂို သာ ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘူးပုံစံနှင့် အသုံးပြုရ မည့်ပုံကို ပေးလိုက်ခြင်း မရှိ သဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ စေတီပုံကို ရိုက်နှိပ်၍ ဘူးပုံစံအား စီးကရက်ဘူးပုံစံ ပြုလုပ်၍ ပို့ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြော သည်။
”ဗမာပြည်အတွက်လှတဲ့ပုံ၊ ကောင်း တဲ့ပုံကို လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ သူတို့ဘာ သူတို့ ဗမာပြည်ရဲ့ Sample ကို ရွှေတိဂုံ လို့ပဲ သူတို့ဘာသာ သူတို့ထင်ပြီး လုပ် လိုက်သလား မသိဘူး။ စီးကရက် စက် ရုံပါတဲ့ အတွက်အထဲမှာ စီး ကရက်ဘူးပုံ ထွင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု ဦးဇင်ဦးက ဆက်ပြောသည်။
လက်ဆောင်ပေးရန် မှာယူထား သော ဘူး ၅ဝ တွင် ကုမ္ပဏီ၌ ကျန်ရှိ သော ၃၄ ဘူးကို သက်ဆိုင်ရာက ထိန်း သိမ်းပြီး လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ် ထားသော ၁၆ ဘူးကိုလည်း တတ်နိုင် သ လောက်ပြန်လည်သိမ်း ဆည်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာ သာသနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစွန်းထင်း အထိခိုက်မခံတဲ့ ကာလမှာ ဒီလိုက မဖြစ်သင့်ဘူး”ဟု သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဖူရှင်းဘရားသား(စ်)ကုမ္ပဏီကမှာယူခဲ့သောလက်ဖက်ခြောက်ဘူး၅ဝကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်ပြီးဈေးကွက်တွင်းရောင်းချ ရန်ရည် ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းနှင့် စီးက ရက်ဘူးပုံဖြင့်ရွှေတိဂုံစေတီ ရိုက်နှိပ်ခြင်း အား ကုမ္ပဏီမှ အမှန်တကယ် မသိရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးဇင်ဦးကရှင်းပြသည်။
ဒီမိုကရေစီကို ဖင်ခုထိုင်ပြီး သရုပ်ပျက်ဝတ်စားလာသော မြန်မာ မော်ဒယ်များ
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
အမြင်မတော်တော့လည်း ရေးကြည့်ချင်သည်။ သို့ပေမယ့် ဤလောကသားအားလုံးကို တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်း မဟုတ်သလို အပြစ်ဆို၍ တမင်ရေးသားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လေးတွေ လမ်းမှားတွေနောက်မလိုက်မိစေလိုသောကြောင့်ရေးသားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့Facebook စာမျက်နှာနှင့် ဘလော့ဂါတစ်ချို့မှာ အကျယ် တ၀င့်ဖေါ်ပြပြီး ဝေဖန် မှုပေါင်းများ စွာနဲ့ကြုံရတဲ့ Myanmar Model Show တစ်ခုကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး ဤသို့ဖြစ် ကုန်ပြီလား..မြန်မာ့ ယဉ်ကျေး မှု ဆိုတာကကော စာအုပ်ထဲ မှာ ပုံပြင်အဖြစ်နဲ့သာ ရှိနေ ခဲ့ပြီလော..ဒီလို သရုပ်ပျက် ၀တ်စား ဆင်ယင်မှု ကိုကော ထိန်းချုပ်မယ့် ဥပဒေ မရှိတော့ပြီလား ဆိုပြီး တွေးမိ လာပါတယ်။ ဒီလိုသရုပ်ပျက်မှုတွေအတွက် ပညာပေး ဆောင်းပါး ပေါင်းများစွာလည်း ဖက်ရှုဖူးခဲ့ရသလို ကိုယ်တိုင် လည်း ရေးသားဖူးပါပြီ..ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အခြေအနေက ပိုမိုဆိုး ရွာလာသော အခြေအနေ တရပ် အဖြစ် မြင်ယောင် သုံးသပ် မိပါတယ်။
မော်ဒယ်လောက ကို လူငယ်တွေ ဘာလို့လျှောက်ချင်ကြသလဲဆိုရင် အနုပညာ(သရုပ်ဆောင်) ပိုင်းတစ် ခုမှာ နေရာရချင်သောကြောင့် ဤနေရာမှ အစပျိုး၍ စတင်ကြ သည်ဆို လည်းမမှား ပါဘူး...တစ်ချို့ ငွေကြေးတက်နိုင်ပြီး အရှိန်အ၀ါ(ပေါ်ပြူလာ)ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာရှိသလို တစ်ချို့လည်း ၀ါသနာ အ ရ လုပ်တာရှိကြပါတယ်..တစ်ချို့ကျ ငွေကြေးမတက်နိုင်ပဲ ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာ ကျင်လည်ရင်း ဘ၀ ပျက် သွားသူတဲ့ မော်ဒယ် များလည်း များစွာပင်ရှိပါသည်။
ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ပြောထားတာဖက်ဖူးပါတယ်" ဘ၀ပျက်တယ်ဆိုတာ ငွေကြေးမလုံလောက်လို့ ဆပွန်ဆာရှာရင်း ပျက်စီးသွားကြတာပါ။ မော်ဒယ် ရှိုးလ် တစ်ခု တက်ဖို့ဆိုက အ၀တ်အစား အတွက် ကုန်ကျစရိတ်..ပြီးတော့ သွားလာဖို့အတွက် ကားလည်း အဆင်သင့်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်၊ အဲဒီအချက်တွေမရှိရင် အောင်မြင်မှု ရှာဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့် ဆပွန်ဆာရှာရင်းကနေ တစ်ချို့ ဘ၀တစ်ခုလုံးပုံပေးလိုက်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်" လို့ တက်သစ်စမော်ဒယ် တစ်ယောက်က ပြောထားပါသေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ မော်ဒယ်ရှိုးတွေအတွက်က အ၀တ်အစားဖိုး သိပ်ပြီး မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ နဲ့ ဘော်လီ တစ်ထည်ရှိရုံဖြင့် မြန်မာ့မော်ဒယ်လောကကို ၀င်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ၀တ်စားဆင်ယင်လာတာကို ခွင့်ပြုတဲ့ မိခင် များကိုပါ အံ့သြမိတာ အမှန်ပါ။ အဖေရှေ့ အမေ ရှေ့ တွင် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီနဲ့ သွားလာရတာ မရှက်မကြောက်ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်များ၏ ခံယူချက်သည်ကား ခေတ်လွန်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ဖော်ကျူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပဲ ၀တ်စားပြီး ပြိုင်နေကြတာပဲလို့ မပြောပါနဲ့လား ...အရင်ဆုံးသိထားရမှာက ငါနေထိုင်နေတာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာပါပဲ....ပြီးတော့ လက်ရှိ လူငယ်တွေက ပြောလိုက်ရင် "ဒီမိုကရေစီခေတ် ရောက်နေတာတောင် အတွေးခေါင်နေသေးတယ်" တဲ့..အတွေးခေါင်တာမဟုတ်ပါဘူး...တကယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို နားမလည်ကြတာက ဒီလို သရုပ်ပျက် မော်ဒယ်လောကသားတွေပါပဲ...ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သရုပ်ပျက်နေထိုင် သရုပ်ပျက် ၀တ်စားလာကြတာဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဖေါ်မှ လှတာမဟုတ်ပါဘူး...မဖေါ်နဲ့လို့လည်းမတားပါဘူး...သင့်တင့်ယောက်ပက်အောင်တော့ ဖေါ်ပါ။ မလွန်စေနဲ့ပေါ့။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး မင်းသမီးတစ်ယောက်က လည်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်(နာမည်ကိုတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး)" ဖေါ်တိုင်း အကျင့်ပျက်တာမဟုတ်ပါဘူး ..ခေတ်နဲ့ညီအောင်တော့ လိုက်ပြီး ၀တ်စားတာပဲလေ...ဒါကို ရိုင်းတယ်လို့လည်း မဆိုနိုင်ပါဘူး..အားလုံးက နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်နေတာဆိုတော့လေ..ဘာပဲပြောပြော sexy ကျကျနေထိုင်တာလေး သဘောကျမိတယ်"ကဲဗျာ ခေတ်ကို အပြစ် ပုံချပြီး အဲလိုပြောသွားတော့ သူ့ပရိတ်သက်တွေလည်း အတုယူပြီး ချွတ်ပြကြတာ ဆန်းကြယ်မယ်မထင်ပါဘူး...လမ်းပြတွေကမှ အကျင့်မကောင်းတာ..လမ်းပြမကောင်းတော့ နောက်လိုက်တွေလည်း မဖြောင့်နိုင်တော့ဘူးလေ...
ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် နောက် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ သရုပ်ပျက်ဝတ်စားမှု ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်လို့...ဒီအတွက်လည်း တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဥပဒေတရပ်ပြဌာန်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဥပမာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမှာဆို ကျောင်းသူတွေကို ဆံပင်အရှည်မထားရဘူး..လည်ပင်းကုတ်လောက်သာထားခွင့်ရှိတယ်(၂၀၁၃ မှာ ဒီဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်)အဲလို ဥပဒေမျိုး ကာလရှည်စွာ ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ထိုနည်းတူပဲ မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း မလေးမိန်းခလေးတွေဟာ အပြင်သွားရင် ခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့ဟာမပါရင် ရဲကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခွင့်ရှိသလို ထောင်ဒဏ်လည်းကျခွင့်ရှိတဲ့ ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ခုထိ ကျင့်သုံးနေဆဲလို့ စာရေးသူ အသိတစ်ယောက် ပြောပြလို့ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ယဉ်ကျေးပြီး ခြေမျက်စိ မပေါ်အောင် ၀တ်စားလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေဟာ အခု လူမြင်ကွင်း ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ သားနှင့် အမေ..အဖေ နဲ့ သမီး မကြည့်ရဲအောင်ပဲ ၀တ်စားဆင်ယင်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခံ ..ရုပ်သံတွေမှာပါအောင် ဖေါ်ပြ ချွတ်ပြပြီး သရုပ်ပျက် အလှအပတွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြသနေခြင်းဟာ နိုင်ငံကို စော်ကားတာနဲ့တူသလို အဘိုး အဘေး တွေကိုလည်း စော်ကားနေတာနဲ့တူတယ်လို့ စာရေးသူ မြင်မိပါတယ်။
ရှိပါသေးတယ်..တစ်ချို့ မော်ဒယ်ရူးလေးတွေလည်း...ပြိုင်ပွဲထိ မရောက်သေးပဲ နာမည်ရချင်နေတာကြောင့် အဖေါ်အချွတ် ပုံတွေရိုက်ပြီး မြန်မာမော်ဒယ်များ ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်နဲ့ ဘလော့ဂါ တွေဆီကို ပုံတွေ ပေးပို့ ကြော်ငြာခိုင်း ..မိမိ facebook စာမျက် တွေမှာ မရှုမလှ ကြည့်ရန်မသင့်တောင်လောက်အောင် ပုံတွေကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစာ တင်ပြပြီး ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ဘေးလွယ်အိတ်မော်ဒယ်ရူး မြောက်မြားစွာလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာ မိန်းခလေးတွေအနေနဲ့ အနုပညာ ဆိုတဲ့ စကားကို ဗန်းပြ ..ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားကို ဖင်ခုထိုင်ပြီး သရုပ်ပျက် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကို အတက်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြည်သင့်တယ်လို့လည်း မြင်မိတွေးမိပါတော့တယ်။
မော်ဒယ် ရူးလေး ရူးပြီး ဘ၀ မပျက်မိစေဖို့နဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ညှိုးနွမ်းအောင် မလုပ်မိစေဖို့ မြန်မာမော်ဒယ်ပေါက်စလေးများသို့ ပန်ကြားအပါတယ်ခင်ဗျာ................
Bagan Keyboard Pro v1.6.8 for Android (New Update)
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ဖြစ်တဲ့ Bagan Keyboard Pro version အသစ် v1.6.8 ထပ်မံထွက်ရှိလာပါတယ်။ အခု version မှာတော့
Bagan Keyboard Pro v1.6.8 for Android (New Update) ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါသည်။
Bagan Keyboard Pro v1.6.8 for Android (New Update) အားရယူရန်
သွေးနှင့် ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအား လျော့ကျသူများ ခိုချေးအနံ့ကို ရှောင်ရန်လို
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၂၆ ။ ။ သွေးရောဂါများနှင့် ကင်ဆာ ရောဂါ ကုထုံးများကြောင့် ကိုယ်ခံအား လျော့ကျ နေသူများ ခိုချေး အနံ့ကို အထူး သတိထား ရှောင်ကြဉ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သွေးရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ရဲမြက ပြောသည်။ သွေးဖြူဥ နည်းခြင်း၊ ချဉ်ဆီ အားနည်းခြင်းနှင့် ကင်ဆာ ကုထုံးများကြောင့် ကိုယ်ခံအား လျော့ကျ နေသော လူနာ များ၌ ကိုယ်ခံအား လျော့ကျ နေလေ့ ရှိရာ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ပြင်ပမှ ပိုးများ ကူးစက်ရန် လွယ်ကူပြီး ပိုးကူး စက်ခြင်း ဖြင့် ရောဂါ အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွား လာတတ် ကြောင်း၊ ခိုချေးကို ရှူရှိုက် မိပါက မှိုပိုး ကူးစက် နိုင်ခြင်း ကြောင့် အထူး ဂရုပြုရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ရောဂါပိုးများဟု ဆိုရာတွင် ဗက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ နှင့်မှိုပိုးများ ပါဝင်ပြီး မှိုပိုးမှာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အထူး သဖြင့်တော့ မှိုပိုးကို ဆရာတို့က ပိုကြောက်တယ်။ ကြောက်စရာ အကောင်း ဆုံးက ငှက်ချေးပဲ။ ငှက်ချေးထဲမှာမှ ကြောက်စရာ အကောင်း ဆုံးကတော့ ခိုချေးပဲ။ ခိုလောက် ကြောက်စရာ ကောင်းတာ မရှိဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခိုချေးထဲမှာ မှိုပိုးတွေ ပိုများတယ်။ ခုခံအား ကျနေတဲ့ သူတွေ၊ သွေးဖြူဥ နည်းနေတဲ့ သူတွေ ခိုချေးရှူမိ ရင်တော့ မလွယ်ဘူး။ ရောဂါ ကူးစက်မှု ပိုလွယ် တာပေါ့'' ဟု ပါမောက္ခ ဦးရဲမြက ပြောသည်။ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးကို အထး ဂရုစိုက်ကြလေ့ ရှိသော်လည်း ယင်းသို့ ငှက်ချေးများမှ တစ်ဆင့် ကူးစက် နိုင်ခြင်းကို သတိ ပြုမိလေ့ မရှိကြဘဲ ခိုများမှာ နေရာ တကာတွင် ရှိနေပြီး လူ အများ အနေဖြင့်လည်း ထမင်းကျန် များကို ချကျွေးလေ့ ရှိခြင်းကြောင့် လူ့ ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် အနီးစပ်ဆုံး အခြေ အနေ ဖြစ်ပြီး ဂရုပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
''မှိုပိုး ဆိုတာ အမျှင်လေးတွေ အလုံး လေးတွေ၊ ကျွန်တော် တို့က အဲဒါကို ပိုကြောက်တယ်။ အထူး သဖြင့် ရာသီ ဥတု စိုထိုင်း နေတဲ့ အချိန် တွေမှာ ဆိုရင် မှိုပိုး တွေက ပိုကြိုက်တယ်။ ပိုပွား တယ်။ မိုးတွင်း မှာဆို အကျÐမှာ မှိုတက် တယ်။ အကျÐမှာ တက်တာ ကိစ္စ မရှိဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် ထဲတွင် ပိုးဝင်ရင်တော့ ရောဂါပိုး တွေကို ဖျက်ဆီးရတာ သိပ်ခက်ခဲ ပါတယ်။ ဒီ လိုလူနာတွေ ကလဲ ရောဂါပိုး တစ်ခု ကူးစက် သွားရင် ပျောက်ဖို့မလွယ်တဲ့ အတွက် လိုက်နာ ရမယ့် အချက်တွေကို မိသားစု ဝင်တွေ ကပါ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်''ဟု သွေးရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဦးရဲမြက ဆက်လက်ပြောသည်။
လူနာများ အနေဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်း ရောဂါပိုး ဝင်ရောက် နိုင်သော နေရာ များကိုလည်း သိရှိ ထားရန် လိုအပ်ကာ ယင်းတို့မှာ လက်နှင့် အရေပြား၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ဆေး ခြင်းဖြင့် ကာ ကွယ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း၊ အစား အစာမှ တစ်ဆင့် ရောဂါပိုး မဝင်ရောက် စေရန် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လူနေ ထူထပ်သော နေရာ များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့ကို နည်းလမ်း တကျ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် သွေးကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် ဆေးရုံသို့ လာရောက် ပြသသူ များမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၁ဝဝ ခန့် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ခိုစာရောင်းချရာ နေရာတွင် ခိုများ ပျံဝဲနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - ဖိုးသာထူး
Posted by drmyochit Wednesday, August 28, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
၁. သွားတိုက်စဉ် အချိန်ကြာမြင့် စွာတိုက်ခြင်း၊ မကြာခဏသွားတိုက် ခြင်း
မကြာခဏ သွားတိုက်ခြင်းဖြင့် သွား၏အပေါ်ယံလွှာတွေ စားသွား ပြီး နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ကို သုံးကြိမ်ခန့် သွားတိုက်နိုင်ပြီး အနည်း ဆုံးမနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် တစ်ခါတိုက်လျှင် ၂-၃ မိနစ်ခန့် သာ တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ယင်းကဲ့သို့ဖိတိုက်ခြင်း က သွားတွေ ပိုဖြူလာမည်ဟု ယူဆမထားသင့်ပါ။ ဖြူလည်း မဖြူ လာနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ယင်းကဲ့သို့ ဖိတိုက်ခြင်းအားဖြင့် သွားဖုံးများ၊ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာများ စားသွား ကာ သွားပိုး ပိုစားနိုင်ပါ တယ်။
အစားစားပြီးပြီးချင်း လူအများ စုက သွားတိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက တော်တော်ကို လွဲနေတဲ့အမှားကြီးပါ။ ယင်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သွားကို ပိုမိုထိခိုက် ဒဏ်ရာရစေပါ တယ်။ အစာစားပြီးပြီးချင်း အစာထဲ မှာ ပါလာတဲ့ အက်ဆစ်တွေက သင့်ရဲ့ အပေါ်ယံကြွေလွှာကို အားနည်းစေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စားပြီးနောက် မိနစ် ၃၀ လောက်ထားပြီး တံတွေးနဲ့ အစာထဲက အက်ဆစ် တွေကို ဓာတ် ပြယ်စေပြီးမှ သွားတိုက်သင့်ပါတယ်။
သွားတိုက်ရာမှာ အချို့က ဝါးစားတဲ့အခြမ်းကိုသာ တိုက်လေ့ရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစာတွေက ဝါးတဲ့ဘက်မှာသာမက အခြား အတွင်း အပြင်တွေ မှာလည်း ကပ်နေပြီး သွားပိုးစားနိုင်တဲ့အတွက် သွားရဲ့ မျက်နှာပြင်အားလုံးကို တိုက်ဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
၅.သွားတိုက်ရာမှာ လျှာကို လျစ်လျူ ရှုမထားသင့်ပါဘူး။
၆.မိမိနဲ့သင့်တော်တဲ့ သွားပွတ်တံ မရွေး မိခြင်း
သင့်တော်တဲ့ သွားပွတ်တံ တစ်ခုမှာ သင့်တော်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့ သင့်တင့်တဲ့နူးညံ့မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် သွားပွတ်တံ တစ်ချောင်းဟာ သုံးလတစ်ကြိမ် လဲ လှယ်သင့်ပါတယ်။
လူအများစုက စားပြီး သောက် ပြီးရင် အာလုပ်ကျင်းဖို့ သတိမရ တတ်ပါဘူး။ အာလုပ်ကျင်းခြင်း အားဖြင့် အစားအကြွင်းအကျန် တွေကို ဖယ်စေရုံသာမက ကြွေလွှာ တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အက်ဆစ် ဓာတ်ပြင်းထန်မှုကိုပါ လျော့နည်းစေ ပါတယ်။
၁၀. သွားဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်မစစ် ဆေးခြင်း
စတဲ့လွဲမှားနေတဲ့ခံတွင်းသန့် ရှင်းရေး ဆိုင်ရာအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်သင့် ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသူများမှ ပုဒ်မ ၁၈ ကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် ဆန္ဒပြ
ပုဒ်မ ၁၈ ဖျက်သိမ်းပေးရေး ဆန္ဒပြနေသူများကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မျိုးမြင့်အောင်)
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းနှင့် စုဝေးခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ကို အမြန်ဆုံး ဖျက်သိမ်းပေးရန် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသော လူအများစု ပါဝင်သည့် လူ ၃၀ ခန့်သည် သြဂုတ် ၂၇ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းက ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
လယ်သမားအရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသူများ၊ အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသူများ၊ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး လှုပ်ရှားသူများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လိုင်ဇာသို့ ခရီးရှည် လမ်းလျှောက်သဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသူများနှင့် တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများမှ ဦးဆောင်ကာ လူဦးရေ ၃၀ ခန့်သည် မြေနီကုန်းရှိ လောကနတ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ စတင်ကာ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တို့ကို ဖြတ်သန်းပြီး မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံရှေ့ထိ ပုဒ်မ ၁၈ အား ဖျက်သိမ်းပေးရေး စာတန်းများ ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်အတွက် ပုဒ်မ ၁၈ အား ဖျက်သိမ်းပေးရန်၊ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းကျ ခံထားရသူများအားလည်း အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်တို့ကိုလည်း ကြွေးကြော်တောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။
"ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၇ မှာ နည်းဥပဒေက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်ခြင်း မရှိစေရဆိုတဲ့ အချက်ပါထားပေမယ့် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲဆိုနေတာက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအပေါ် ကျွန်တော်တို့အတွက် သံသယ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ သမ္မတ၊ လွှတ်တော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရတာ မဟုတ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသံတွေကို လမ်းပေါ်ကနေပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ လိုက်လျောပေးခြင်း၊ မလိုက်လျောပေးခြင်းကတော့ လွှတ်တော်များနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်" ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လိုင်ဇာသို့ လမ်းလျှောက်သောကြောင့် အလုံမြို့နယ်မှ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရသူ ကိုစည်သူက ပြောကြားသည်။
Xperia Z Pro Theme အလန်းလေးပါ ပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အကြိုက်တွေ့မှာပါ
သူရဲ့ Wallpaper တွေကလည်း မျက်စိအေး ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့
သူကို အသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိဖုန်းမှာ launchers တစ်မျိုးမျိုးရှိရပါမယ်